daily bread Archives | New Light Myanmar %
Myanmar Christian Community
Category: daily bread
Posted on 14Aug
ဖတ်ရန်: ဟေရှာ ၄၃း၁-၇ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ:| ဆာ ၈၉-၉၀ |ရော ၁၄
သင်သည် ရေကို လျှောက်သွားသောအခါ၊ သင်နှင့်အတူ ငါရှိ၏။ မြစ်တို့ကို လျှောက်သွားသောအခါ မနစ်မမွန်းရ။ (း၂)
ဖောင်လမ်းပြသူက ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့ကို မြစ်အနားသို့ လိုက်ပို့ပြီး အသက်ကယ်အင်္ကျီများကို ဝတ်ဆင်ထားရန်နှင့် လှော်တက်များကို သေချာဆုတ်ကိုင်ထားရန် ညွှန်ကြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ လှေထဲသို့ ဝင်သောအခါ လှေ၏အလေးချိန်ကို ထိန်းညှိရန်နှင့် ရေစီးသန်သော နေရာများတွင် တည်ငြိမ်မှုရှိအောင် ထိုင်ရမည့်နေရာများကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ရေကြောင်း ခရီးရှည်တွင် ကြုံတွေ့ရမည့် ရင်ဖိုစရာများကို ဦးစားပေး ဖော်ပြပြီးနောက် ရေစီးကြမ်းသည့်ရေကြောကို ဖြတ်သန်းရာတွင် ထိရောက်စွာ ပဲ့ထိန်းနိုင်ရေး ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နာရန်လိုအပ်သော၊ ကြားသိရန်လိုအပ်သော ညွှန်ကြားချက်များကို အသေးစိတ်ပြောပြသည်။ လမ်းခရီး၌ ပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းသော အခိုက်အတန့်များရှိမည် ဖြစ်သော် လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏လှေလမ်းခရီးက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းမည်ဟု သူက အာမခံသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဘဝအသက်တာက ရေစီးသန် သည့်မြစ်၌ ဖောင်စီးသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ သဘောကျသည်ထက် ပို၍ပြင်းထန်သော အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်ခံစားရသည်။ ပရောဖက်ဟေရှာယမှတစ်ဆင့် ဣသရေလလူ တို့အား ဘုရားသခင်ပေးသည့်ကတိစကားက အဆိုးဆုံးဖြစ်သွားမည်ကို စိုးကြောက် နေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များကို တည့်မတ်ပေးနိုင်သည်။ […]
Posted on 14Aug August 14, 2018
ဖတ်ရန်: လု ၆း၃၇-၃၈ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ: □ ဆာ ၈၇-၈၈ □ ရော ၁၃
စွန့်ကြဲတတ်သောသူသည် ကြွယ်ဝလိမ့်မည်။ သူတစ်ပါးကို ရေလောင်းသောသူသည် ကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်း အကျိုးကို ခံရလိမ့်မည်။ (သု ၁၁း၂၅)
ကျွန်တော်စာတိုက်သို့ အရေးတကြီးထွက်လာခဲ့သည်။ လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာက အမြောက်အမြားရှိနေပြီး စာတိုက်ထဲသို့ ဝင်လိုက်သောအခါ အဝင်တံခါးဝနားတိုင်အောင် တန်းစီနေသော လူအုပ်ကြီးကို မြင်လိုက်ရသဖြင့် စိတ်ညစ်သွားသည်။ ‘‘အရေးကြီး ပါတယ်ဆိုမှ စောင့်နေရတယ်’’ ဟု နာရီကို ကြည့်ပြီး ရေရွတ်မိသည်။
အသက်ကြီးကြီး လူစိမ်းတစ်ဦးက ကျွန်တော့်အနား ချဉ်းကပ်လာချိန်၌ ကျွန်တော်က တံခါးလက်ကိုင်ကို ကိုင်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။ ‘‘ဒီမိတ္တူကူးစက်ကို ကျွန်တော် သုံးတာ အဆင်မပြေဘူး’’။ ‘‘ငွေကတော့ ဝင်သွားပြီ၊ ကျွန်တော်က ဘာကို ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလဲမသိဘူး’’ ဟု ကျွန်တော်တို့အနောက်ရှိ မိတ္တူကူးစက်ကို ညွှန်ပြလျက် ပြောသည်။ ကျွန်တော့်အား ဘုရားသခင် ဘာလုပ်စေချင် သည်ကို ကျွန်တော်ချက်ချင်း သိလိုက်သည်။ တန်းစီရာမှ ထွက်လိုက်ပြီး ဆယ်မိနစ်အတွင်း ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေး နိုင်ခဲ့သည်။
ထိုလူကြီးမှာ ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးတင်ပြီး ထွက်ခွာသွားသည်။ ပြန်လည် တန်းစီရန် ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရာ လူအားလုံးရှင်းသွားပြီဖြစ်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ကောင်တာသို့ ကျွန်တော်တန်းသွားနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့နေ့မှ အဖြစ်အပျက်က […]
ဖတ်ရန်: ဟေဗြဲ ၁း၁-၁၀ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ: □ ယောဘ ၂၀-၂၁ □ တ ၁၀း၂၄-၄၈
ထိုသားတော်သည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ရောင်ခြည်နှင့် ဇာတိအဖြစ်တော်၏ ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်၍…။ (း၃)
အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုကို ဆင်နွဲရန် ကျွန်မခင်ပွန်းသည်က ကျွန်မကို ဒေသတွင်းရှိ ပန်းချီပြခန်းသို့ ခေါ်သွားပြီး လက်ဆောင်အဖြစ် ပန်းချီကားတစ်ချပ်ရွေးရန် ပြောသည်။ သို့နှင့် တောအုပ်ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသည့် စမ်းချောင်းပုံပန်းချီကားကို ကျွန်မ ရွေးလိုက်သည်။ ရေမျက်နှာပြင်က နေရာယူထားသောကြောင့် ပန်းချီကားထဲ၌ ကောင်းကင်ကို မမြင်ရပေ။ သို့သော် စမ်းချောင်းလေးက သစ်ပင်ထိပ်ဖျားနှင့် မှုန်ရီမှိုင်းပျနေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလင်းပြန် ထင်ဟပ်ဖော်ပြနေသည်။ ကောင်းကင်ကို မြင်လိုပါက ကြည့်နိုင်သည့်နည်းမှာ ရေမျက်နှာပြင်ကို ကြည့်ရုံပင် ဖြစ်သည်။
ဝိညာဉ်ရေးရာသဘောတရားအရ သခင်ယေရှုသည်ထိုစမ်းချောင်းလေးကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင် မည်သူဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိလိုသောအခါ သခင်ယေရှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြည့်ရပါသည်။ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ရေးသူက ထိုသခင်သည် ‘‘ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ရောင်ခြည်နှင့် ဇာတိအဖြစ်တော်၏ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်’’ ကြောင်း ဖော်ပြထားသည် (၁း၃)။ ‘‘ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏’’ စသည့်ကျမ်းစာမှ တိုက်ရိုက် ဖော်ပြမှုအားဖြင့် ဘုရားသခင်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သင်ယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် မိမိတွေ့ကြုံနေရသောအရာများကို ဘုရားသခင်မည်သို့ တုံ့ပြန်မည်ကို […]
Posted on 03Aug
ဖတ်ရန်: ဆာ ၁၀၇း၁-၁၆၊ ၃၅-၃၆ သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ: □ ဆာ ၆၀-၆၂ □ ရော ၅
တစ်ဖန် လွင်ပြင်ကို ရေနှင့်ပြည့်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သွေ့ခြောက်သော အရပ်ကိုလည်း စမ်းရေထွက်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း ပြုတော်မူ၏။
မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကို ကျွန်မ အမြဲတမ်းသဘောကျသည်။ ကလေးဘဝက မယုံနိုင် လောက်အောင် ဝုန်းခနဲဒိုင်းကနဲ မိုးကြိုးပစ်ပြီး၊ မိုးစက်မိုးပေါက်ကြီးများ ရွာချလျှင် ကျွန်မတို့ မောင်နှမများ မိုးရေထဲ ပြေးလွှားဆော့ကစားကြသည်။ အိမ်ဘေး၌ ဗွက်အိုင် လုပ်ပြီး ခြေချော်လ်ိုက်၊ လျှောဆင်းလိုက်နှင့်ကစားကြသည်။ အိမ်ထဲပြန်ဝင်ရန် အချိန် ရောက်သောအခါ ကျွန်မတို့သည် ရေစိုရွှဲနေသည့် ကြွက်စုတ် ပမာ ဖြစ်တော့သည်။
မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သော်လည်း ကျွန်မတို့ အလွန်ပျော်ရွှင်လျက် စိတ်လှုပ်ရှားခံစားခဲ့ရသည်။ အားကြီး ပြင်းထန်သည့်လေနှင့်မိုး၏ လွှမ်းမိုးမှု၌ နစ်မြှုပ်နေ၍ ကျွန်မတို့ ပျော်နေခြင်းလား၊ ကြောက်နေခြင်းလား ဆိုသည်ကို မသိ တော့ပါ။
ဆာလံ ၁၀၇ တွင် ဘုရားသခင်၏ ပြန်လည် ငြိမ်ဝပ် စေလျက် တည်ဆောက်ပေးသည့်အမှုကို သွေ့ခြောက်သော ကန္တာရအား အိုအေစစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲစေသည့် အမှုနှင့် နှိုင်းခိုင်းထားသည်ကို (း၃၅) ဖတ်ရင်း အထက်ပါမြင်ကွင်းကို ကျွန်မစိတ်ထဲ ပြန်မြင်ယောင်မိသည်။ ကန္တာရမြေကို အိုအေစစ်ဖြစ်စေသည့် မိုးသည် သာမန် တဖွဲဖွဲရွာသည့်မိုး မဖြစ်တန်ရာ။ […]
Posted on 01Aug August 1, 2018
ဖတ်ရန်: လု ၁၅း၁-၇ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ: □ ဆာ ၅၄-၅၆ □ ရော ၃
ဤသူသည် ဆိုးသောသူတို့ကိုလက်ခံ၍ သူတို့နှင့်အတူ စားပါသည်တကား။ (း၂)
အီးဒစ်သည် ဘာသာရေးကို အလေးအနက်မထားသူဖြစ်သည်။ သို့သော် တနင်္ဂနွေနေ့ တစ်မနက်တွင် သူ၏ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုမရှိသော စိတ်နှလုံးအတွက် နှစ်သိမ့်မှုရရှိရန် သူ၏ အိမ်အနီးရှိ အသင်းတော်တစ်ပါးသို့ လမ်းထွက်လျှောက်ရင်း ဝင်ကြည့်သည်။ ထိုနေ့၏ ရွေးချယ်ထားသော နှုတ်ကပတ်တော်သည် ရှင်လုကာ ၁၅း၁-၂ ဖြစ်ပြီး သင်းအုပ်ဆရာက the King James Version: မှ ကောက်နုတ်၍ ဖတ်သည်။ “အခွန်ခံသောသူတို့နှင့် ဆိုးသောသူအပေါင်းတို့သည် နားထောင်ခြင်းငှာ အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်သည်ဖြစ်၍၊ ဖာရိရှဲနှင့် ကျမ်းပြုဆရာ တို့က ဤသူသည် ဆိုးသောသူတို့ကို လက်ခံ၍ သူတို့နှင့်အတူ စားပါသည်တကားဟု ကဲ့ရဲ့ အပြစ်တင်ကြ၏။”
ကျမ်းစာက ထိုကဲ့သို့ ဆိုသည်။ သို့သော် အီးဒစ်၏နား၌ကြားလိုက်သည်မှာ “ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ်သားများနှင့်အတူရှိပြီး အီးဒစ်သည်လည်း ထိုအပြစ်သားများနှင့်အတူ ရှိနေသည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သူသည် ခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင် မတ်မတ်ထိုင်ရင်း သူ့အမှားကို ဖြည်းဖြည်းချင်းသဘောပေါက်လာ သည်။ သခင်ယေရှုသည် သူအပါအဝင်ဖြစ်သည့် အပြစ်သားတစ်စုကို ကြိုဆိုဖိတ်ခေါ် လျက် သူတို့နှင့်အတူ ရှိနေသည်ဟုအချက်က […]
ဘုရားရှိသလား? အပိုင်း (၂)
ဘုရားရှိသလား? အပိုင်း (၁)
We want to lead people intoagrowing relationship with God. We are trying to accomplish our mission by creating environments where people are encouraged to ask questions and explore the realm of science and faith to pursueabetter understanding of God in our lives.
ဒီလို Information ခေတ် မှာ ဘုရားသခင် အား စစ်မှန် သော ယုံကြည်ခြင်း ကိုဉီးတည်ပြီး ၊ ရှေး ဟောင်း အယူ၀ါဒ နဲ့ ပြောင်းလဲနေသော ခေတ် အယူ၀ါဒ ဘယ်လို ခံယူရမယ် ၊ သံတယရှိသောသူ များ နဲ့ အဖြေရှာဖွေနေသူများ လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင် ရန် platform လဲဖြစ်ပါတယ်။ အသစ် သောစိတ်နှလုံး ၊ အသစ် သော အတွေးအ ခေါ် ၊ အသစ်သော မျက်စိ ဖြစ် ပြန်လည် စမ်းစစ် ပြီး အဖြေမှန်ကို ရှာဖွေ စေချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။